हुम्लामा जिप दुर्घटना-४ जनाको मृत्यु बच्चा सहित ७ जना घाइते! दुइजनाको अवस्था गम्भिर…पूरा समाचार पढ्नुस - खबरदार मिडिया
दुघटनामा परि १ जना महिला सहित ४ जनाको ४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते हुनेमा सिमकोट २ ठेहेका जिप चालक सिंगम भण्डारी, सिमकोट ६ बस्ने प्युठानका अजय बस्नेत, सिमकोट ८ खोल्सिकी कल्पना सिंह, सिमकोट ८ खाल्सिका १ बर्षे बालक मिलन सिंह, सिमकोट ८ खोल्सिकी सम्झना शाही नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. १ की झुमझुम लामा र सिमकोट बजारमा बस्ने बाजुराका कबि सिंह रहेका छन् । घाइतेहरुको हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते मध्ये २ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको र बच्चा सहित ५ जनाको अबस्था सामान्य भएको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर टसि अंङजुक लामाले बताए । बलेरो जिप मुल सडक भन्दा करिब ६सय मिटर दक्षिणमा खसेको हुम्ला प्रहरीका प्रबक्ता बिष्टले बताए ।हुम्लाको रेडियो कैलासले समाचार लेखेको छ ।
जिप दुर्घटना भएको खबर पाए लगतै घटनास्थल पुगेका नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानियबासीले उद्धार गरेका थिए । राती भएकाले उद्धारमा केही समस्या भएको घटनास्थल पुगेका ससस्त्र प्रहरी बल हुम्ला प्रमुख डिएसपी मोहन बिस्टले बताए । अधिकाँशको छाथी, टाउको र हात खुट्टामा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।